ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
တစ်ဦးကအောင်မြင်သောစီးပွားရေးထဲသို့ကိုယ်တော်၏ဝါသနာ Turn (အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ!)
ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများဟာဝါသနာအရအဖြစ်စတင်. ဖြစ်ကောင်းအမှန်တကယ်တစ်ဝါသနာအဖြစ်စတင်ခဲ့ကြောင်းလူကြိုက်အများဆုံးကုမ္ပဏီကို eBay ၏အဓိကအွန်လိုင်းလေလံပွဲ site ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဝါသနာပထမဦးဆုံးအဒဲလ်ကွန်ပျူတာပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်အခြားလူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီများမှ, နာမည်ကြီးအာမုတ်ကွတ်ကီး, နှင့် Wendy ရဲ့. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်စဉ်းစားခဲ့ပြီးပြီဆိုပါက, သို့သော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သင့်အတိအကျအဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ထားကြပြီမဟုတ်- သငျသညျလုပ်နေတာပျော်မွေ့လှုပ်ရှားမှုများအမျိုးအစားများကိုစဉ်းစား. သင့်ရဲ့ဝါသနာကဘာတွေလဲ? y ကိုလုပ်ပါ ...
အခမဲ့ Google က Pay-Per-Click ကြော်ငြာ!
အင်တာနက်စျေးကွက်လာ $87 Google က Pay-Per-Click ကြော်ငြာအတွက်သန်းအခမဲ့! ... ထိုအကျော်က $314 သန်းနေတဲ့ရလဒ်အဖြစ်! ... ယခုသူကအဘယ်အရာကိုမျှဖို့ကိုသင် Next ကိုဒီတူလျှို့ဝှက်ချက် Give မှ Going ရဲ့!" အင်တာနက်ကို Multimillionaire Google ကတက်ပြသနိုင်ဖို့တမင်တကာထွက်ဖြစ်ပါတယ်, Yahoo က, MSN ကိုများနှင့်လျှို့ဝှက်၏ဤနဂါးကွာပေးခြင်းအားဖြင့်သည်အခြားကြီးမားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်! (ဒါပေမယ့်သူကပင်ဂရုမစိုက်ပါဘူး!)..
ရောင်းမည်နယူး Utah နေအိမ်
ယင်းဒေသများ၏အတော်ကြာသစ်ကိုအခွင့်အလမ်းများကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းရန်ဆက်လက်နေကြသည်အဖြစ် Utah ပြည်နယ်သစ်တစ်ခုနေအိမ်များ၏လမ်းကိုကမ်းလှမ်းဖို့အများကြီးရှိပါတယ်. ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုသင်အလုပ်များများအဖြစ်ကောင်းစွာ Utah ဧရိယာများအတွက်အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းရှာတှေ့နိုငျ. သင်ဧရိယာထဲမှာရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအသစ်ကနေအိမ်များအမျိုးအစားများကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးပေးနိုင်ရန်အတွက်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအွန်လိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျဘာသာပေါင်းစုံက်ဘ်ဆိုက်ရှိသင့်အဘယ်ကြောင့်. သငျသညျအစဉျအမွဲရဲ့အားသာချက်စဉ်းစားဖူး. ဒီကနေပိုပြီးသိရန်ကလစ်နှိပ်ပါ.
ERP / DRP နှင့်ပိန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသဟဇာတမဟုတ်.
ဘယ်နှစ်ယောက်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏အိုင်တီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများလွှတ်မှအဓိက blocker တွေဟာရှာဖွေတာဘာကြောင့်အသစ်တခုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်နေကြတယ်.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်များတွင်တစ်ဦးကစီးပွားရေး Start ပြီးတော့ Big ခေါ Make ရန်ကဘယ်လို
သင်အခြားလူများအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်ဟုစဉ်းစားမယ့်ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုရှိသည် Do?ထိုအခါမူလစာမျက်နှာစီးပွားရေးစတင်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. အပေါ် Read ... သင်အခြားလူများအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်ဟုစဉ်းစားမယ့်ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုရှိသည် Do? သင်မုန်းတီးပါနဲ့9သို့ 5? သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူဌေးဖြစ်တူပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုအံ့ဩကြပါပြီ? ထိုအခါမူလစာမျက်နှာစီးပွားရေးစတင်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. အပေါ် Read ...
ဒါဟာကောင်းစွာသင်ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုကြည့်ဘယ်မှာတိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးသောသင်ပြောပြရန်ကြိုးစားနေသည်ထိုအချက်ကိုသိသောင့် "သင်အိမ်တွင်ထိုင်နိုင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်လူနေမှုစေရန်မလိုပါ" ကြောင်းငါတို့ရှိသမျှသည်အာရုံစိုက်မှုရသိကြပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးမှာပါအိမ်မှာအခြေစိုက်စခန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန္တရာယ်မျှဝေထားတဲ့နှစ်သက်ဖွယ်ကြေညာချက်င်.
သင့်ရဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကျဘျဆိုကျလိုပါသလား? (အပိုင်း 1)
သငျသညျသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များမှာ. သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှစ်ဦးစလုံးကိုအင်တာနက်ကိုသုံးပါ. သိသာထင်ရှားတဲ့သင်သည်များစွာသောရှိပါတယ်သိကြ, ထွက်ထိုအရပ်၌များစွာသောကို web sites များ. ပိုများသောထို့နောက်ဖွယ်ရှိ, သင်ပင်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ web site ကိုမှတဆင့်ဝယ်ယူမှုများလုပ်ပြီးပြီ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူတူပါပဲလုပ်နေနိုင်သိသာဖြစ်ပါသည်. မုချ, အပို e-commerce ရောင်းအားသာသင့်ရဲ့အောက်ဆုံးလိုင်းကကူညီနိုင်. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကယ့် web site ကိုမလိုအပ်ပါဘူး? ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ, အဘယ်အရာကိုတစ်ဦး web site ကို rea စဉ်းစားပါ ...
အဆင့်အားဖြင့်အဆိုပါလွယ်ကူသောလမ်းငွေအွန်လိုင်းအဆင့် Make ရန်ကဘယ်လိုလေ့လာပါ
Most entrepreneurs these days think gettingawebsite and some product to sell online isagreat way to make money, လည်း, most advertisers make it seem quite easy with all the bells, whistles, promises and the marketing tools they present.
Want to incorporate your business? ဒီမှာပါ5good reasons to incorporate online...
ကျွန်မပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းကြော်ငြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ရောက်တဲ့အခါ, ငါထိပ်တန်း search engine ကိုအဆင့်သို့ငါ၏အက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုတင်မယ်လို့သောမှော်ပေါင်းစပ်ရှာဖွေနေခဲ့သည်
အနည်းငယ်သာမြို့တော် outlay အတူအမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်မည်သို့အသေးစိတ်.
အမေရိကန် Marketplace အတွက်ချောင်လက်ဖက်ရည် – Affiliates အဘို့အခွင့်အလမ်းများ
ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြား၏ကြီးမြတ်သောအသိပညာအားဖြင့်မောင်းနှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ချောင်လက်ဖက်ရည်ဝယ်လိုအားနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်လက်ဖက်ရည်အတှေ့အကွုံအရည်အသွေးကြီးထွားလာတစ်ကျော့ပြန်လာရှိပါတယ်. ဝယ်လိုအားတိုးမြှင့်အဖြစ်, အသစ်သောအခွင့်အလမ်းတွေချောင်လက်ဖက်ရည်စျေးကွက်နှင့်ရောင်းဖို့ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ပေါ်ထွန်း.
အဆိုပါဖောင်းပွယုံကြည်? – အွန်လိုင်းသန်းနဲ့ချီတဲ့ Making
အသုံးပြုမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲ Lead အဘယ်ကြောင့်?
အဆိုပါအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းသည်ဥပဒေရေးရာနှင့်အခွန်မဟာဗျူဟာ – သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာကန့်သတ်ပြည်တွင်းရေးအရင်းအမြစ်များကိုတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်, '' သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်သင့်အမှုဆောင်အရာရှိအပါအဝင်, ပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကချေ. ထိုကဲ့သို့သောမက်ကင်ဆေးနှင့်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ် PricewaterhouseCoopers အဖြစ်အိမ်များတိုင်ပင်အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု, မတူညီသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအောက်တွင်အကျယ်အထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှုပ်ထွေးကိုင်တွယ်ရန်သူတို့၏ကျယ်ပြန့်ထိတွေ့မှုအတွက်မာနထောင်လွှား. အချိန်အားဖြင့်ဖြတ်သန်းနှင့် t ကိုကိုင်တွယ်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှုပ်ထွေးဖြစ်လာ ...
ငါသည်ငါ့ကွန်ပျူတာပျက်ကျတဲ့အခါမှာနှေးကွေးခြင်းနှင့်ငါမဒေတာရှိခဲ့ခဲ့သည်, အွန်လိုင်းပြန်ရစရာလိပ်စာစာအုပ်နှင့်မပင်ကျွန်မရဲ့ passwords. ငါတစ်ပါတ်အဘို့အပင်ဒီအမသန်မစွမ်းနှင့်အတူနောက်ကျောကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်ထူးခြားတဲ့ဘာမှလုပ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မထင်ခဲ့ဘူး. ဒါပေမယ့်တုံ့ပြန်ချက်ကနေကျွန်မအနည်းငယ်ကလူထက်ပိုပြီးထံမှခဲ့ပြီးပြီ, ဒါကြောင့်သွက်ချာပါဒနှစ်သက်ဖွယ်ဘုံ option ကိုပါပြီမယ်လို့ပုံရသည်. ဟုတ်ကဲ့, ငါနှေးကွေးတယ်, ဒါပေမယ့်ဝေဖန်ဘာမျှမပျောက်ခဲ့တဲ့နှင့်မျှမချိန်းလွဲချော်. အဘယ်ကြောင့်? internal သိုက်, resou ...
မကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးများဒါဖြုန်းတီးနေကြသည်ကတည်းက, မည်သူမဆိုသူတို့ကို tolerates သင်သည်အဘယ်ကြောင့်တွေးမိပေမည်. ဤတွင်အချို့သောရှင်းလင်းချက်များမှာ.
သင့်ကိုယောဘရန်ကျူးလွန်ချိုးဖဲ့ Going? တစ်ဦးကနေအိမ်-အခြေခံပြီးစီးပွားရေးအဆိုပါအဖြေသည်
မိုးသစ်တောဦးပိုင်လီမိတက် – သင်ကခန့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်တည်ဆောက်ခြင်း
သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာ based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်စဉ်းစား? ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူစတင်ရန်အချို့အကြံပြုချက်များမှာ ...
ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး-ဒါဟာကောင်းမွန်သော Cent ကို
သင့်ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာစီးပွားရေးနှင့်သင့် Daily သတင်းစာ Tasks ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကဘယ်လို.
Freelance အောင်မြင်ဖို့ Path: လျှို့ဝှက်ချက်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့သိမှတ်ကြလော့သည်
အကြှနျုပျအဘို့အထဲတွင်ဘာလဲ , အ Jobbers? (ယောဘသည်ရှာဖွေသူများ)
သံမဏိကွန်တိန်နာ Excellent ကကွန်တိန်နာ Make (Else နှင့်အများကြီး)
အမြင့်သို့ပြန်သွားသည်အကြွင်းအကျန်ဝင်ငွေခွန်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား Is, မဟုတ် MLM.
Network ကိုစျေးကွက် – အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါသည်?
ဇီဝနည်းပညာ Careers Up ကိုအပူ
1 / 141234567...နောက်တစ်ခု"နောက်ဆုံး»